Ngaba ngokwenene sibhaptiziwe kwinkqubo "yoyilo" xa kufikwa kwi-3D Spatial? -Izixhobo zeGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Ngaba sixubene ngokwenene kwinkqubo "entsha" xa kuziwa kwi-3D Spatial?
Geospatial - GISezintshaegeomates My
Ngaba sixubene ngokwenene kwinkqubo "entsha" xa kuziwa kwi-3D Spatial?
"Ukuxinwa kweqhosha kunakho ukuvula enye into", ubhale, phantse ekupheleni kwinqaku lakhe, uMuthukumar Kumar, ngokubhekiselele ngqo ekudalweni Iimeko ze3D, ukusetyenziswa kwayo, ukubaluleka kunye elizayo.
Qaphela ukuba u kuthetha ngazo elizayo, ngendlela esishukumisela ukuba sisuke kwi-charlatanism elula, kufuneka ukuba leli lizwi libe ncedisa kumnye (a) amnika ubunzima kunye nokuthembeka okufunekayo kwintsimi yethu yesifundo. Yilapho igama "lingena"ezintsha"U Umbuzo uvela: Xa "into" inokunikezwa isichazi ezintsha?
Intsingiselo yezinto ezintsha njengombono
Ucebisa kwaye unomdla kakhulu nqaku oluzalisa ulwazi olufunekayo kule ngxelo ithi "Ukwenziwa kwezinto ezintsha kwintlupheko yehlabathi elithathu: imarike, ubuchwepheshe kunye nokuphunyezwa ngokufanelekileyo".
Ngokuhambela ibinzana ngomfanekiso obonisiwe, kugxininiswa ukuba Los Tres zixhobo kufuneka zenziwe ngexesha elifanayo kulo "nto" esiya kufumana ezintsha. Ngenxa yokuba, njengoko umbhali weposi exinezela:
"Inxalenye ekhangayo kakhulu yokuvelisa ubuchule, ubuchule, iinjongo kunye nobuchwepheshe obutsha. Nangona kunjalo, ezi ngcamango ziyingxenye encinci yenkqubo entsha. Inxalenye ebaluleke kakhulu isenzo, la ukuphunyezwa ngempumelelo. "
Yipoyinti elungile. Ngaphandle kuqhutywa yonke into ayenzekanga ukuba yiphupha elindele ukuba liyenzeka ngenye imini. Masizibuze ngoko: Ngaba uyazi ukuba "into" isetyenziswe ngokuphathelele "iimeko" kwi-3D Spatial? Ziziphi iindawo? Ngaba uyazibona?
Ewe, ngenxa yokusebenzisa (okanye ukusebenzisa, okanye nje ukwazi ukuba zikhona) zombini ArcGis Pro njenge Qgis2threejs ukudala iziphumo ezibonakalayo ngokupheleleyo kwi-3D, oko kukuthi, ukuthetha malunga nentuthuko ntetho idatha ehlalutyiweyo; isidingo esingakhange sisombululwe kwaye elinde ukujika kwayo kumgca wokuvela kuya kuhlala kuvela (okanye sele sele ivele).
I-3D Spatial njengeqonga elizayo leenkcukacha kunye namava
Kumar uthi "kukho ezinye uphuhliso olumnandi "kwi-3D Spatial. Uphuhliso oluchazelayo, sinokukuqonda ngendlela efanayo 'xa sifaka' kwisitayela somdlalo Grand Theft Auto. Makhe sibonge ukuba ezi mxholo zenziwe ukuguqula okanye ukudala indawo eyahlukileyo kwinto esiyibona ngayo imihla ngemihla njengobomi bokwenene nobuchule.
Oko kukuthi, sibhekisela apha kokubili Eyona nyaniso malunga ne Ukwenyuka kwamaxabiso, iindawo apho ulwazi lwam lokuqala, ndiyaqonda, aluzange luhambe ngaphezu kokuba lube nolwazi kuphela. Yingakho inqaku la namhlanje. Ndiyicinga ukuwela umda, cingisisa nge "ezintsha", kwaye udlulise loo nkxalabo kubo bonke, ngabafundi abanomusa. Siya khona!
Ngokumalunga namava amachiza, imitha kunye nezinye izityalo
Siyazi ukuba i nyaniso Ibhekisela kwingcamango. Ubungakanani bokuba ukukhohlisa kuya kuxhomekeke ekubeni sisebenzisa isikrini sekhompyutheni esilula kunye neefutha zezinto ezixhaswe okanye izixhobo ezidalwa ngumsebenzi osekude esiza kusebenzisa ukuze sihlale siphile kwaye siphila loo nto engokoqobo. Oku kulandelayo nyaniso yangempela, enye apho umsebenzisi efumana intsingiselo yecala kunye nobomi njengokungokoqobo kwihlabathi elintathu elibonakaliswa kuwe.
La nyaniso eyongeziweyo, endaweni yoko, idibanisa izinto ezibonakalayo kwizinto eziyinyani, ukudala indawo "edibeneyo" kuyo ixesha langempela nalapho singalahlekani nokunxibelelana "nenyaniso". Ngale ndlela siboniswa ulwazi ebesingazukukwazi ukulubona "kwiimeko eziqhelekileyo" eziya kuthi zityebise amava ethu.
Iimpawu ezibonakalayo ezithintekayo ezenza umdla umdlalo ka-Kumar kwinqaku lakhe geolocation. Ingongoma ebalulekileyo apha misela kwingingqi apho 'siya kugcoba'. Kubonakala ke ke, ingcamango metaverse. Iqondwa njengelo lizwe libonakalayo (isikweko sokwenyani) apho umntu asebenzisana nabanye esebenzisa i Ubume imele ifanekiso njengomfanekiso okanye ifoto eyaziwayo avatar.
Kwaye nangona Matrix ibe yinkcazo ebonakalayo kwi-cinema, into enomdla, kwamehlo ethu, enye yenzelwe iinjongo zemfundo ukufunda i-GIS kwaye ibeke ingxelo kwiblo ye-Esri:
Ukubeka iziqendu endaweni
U-Kumar ubhekisela kwiiprojekthi ze-3, zonke ezidalwe yinkampani Ingubo. Ifunyenwe ekuqaleni kwayo Imidlalo yokuQala ngabaceli bayo, le projekthi inenjongo yokudala imidlalo esebenzisa i-geolocation ephakanyiswe kumgangatho omithathu kumsebenzisi ozama ukuvelisa uhlobo olwenziweyo olwenziweyo. Kungekudala baqaphela ukuba ngaphakathi ubunye, iqonga lokuphuhliswa kwezemidlalo, kwakungekho abaninzi abasebenzisa imephu. Kwakukho apho kwavela khona ingcamango yokudala yabo inkqubo kunye nayo, Ingubo.
Inkqubo yokuqala yayiquka ukusebenzisa imifanekiso Imephu (owandulela phambili weMantle), ezo ziye zaguqulwa ngendlela yokutsalwa kweepekseli zazo ukuba zibeke "ezikhethiweyo" eziya kuhambelana nesimo sezitalato zedolophu ngelixa zigcina imibala yomfanekiso wokuqala.
Baqaphele ukuba le niche, ukusetyenziswa kweemephu, ingafakwa kwiindawo ezahlukeneyo ezazingekho nje imidlalo. Kumar uchaza ngoko Project Brownsville, uluntu lwaseBrooklyn, eNew York, apho, ngenxa yobudala kunye nokungahambi kakuhle kwezindlu zabo kunye nokungabikho kokucwangciswa okwenziwe ngabasemagunyeni, kukho indawo ebumpofu kunye nobugebengu obuphawulwe Ukungakhuselekanga kwabemi bungozi bemihla ngemihla.
Kwakudingeka ukuba le meko yaziwe lihlabathi ngendlela engazange ihoye okanye iphele iyintloko yendaba ethile elityelweyo kwiintsuku ezimbalwa. Olunye uhlobo lonxibelelwano lwathi emva koko lwakhawulwa oluthi nangona kuboniswe into ebonisiweyo kuveliswa, kuboniswe ngendlela enomtsalane, edlalayo, ethi "amagwegwe" abo bayibonayo kwaye baphule amacebo endibano kunye ulungelelwaniso lwengxelo yohlobo lwamaxwebhu.
Ngenxa yale njongo, umhlali ngamnye unokudala ibali lakhe elichazwe kwifom ye "umqulu osebenzisanayo"Okanye"Imidlalo ye-docu"(Ngokuqhelekileyo esetyenziswe ngokwenene kubonisa" njengoMzalwana Omkhulu ", umzekelo) apho bangakwazi ukuphinda bahlaziye indawo yabo ngokubonakalisa iingcinezelo zemihla ngemihla zokuhlala kule ndawo kunye nokuxelela amabali ngombono wakhe. Ke, ngeMantle kunye noManyano, baye bakwazi ukuphinda bafumane ulawulo lokusingqongileyo ukuze babalise ibali elinokuthi ekugqibeleni litshintshe indawo yabo ibe ngcono.
Ukufezekisa oko kuthiwa ukufaniswa kwezithuthi ezizimeleyo, Ingubo inikezela njengexabiso elongezelelweyo ukukwazi ukutola iinkqubo ezininzi zokutya (ukubandakanywa) kweempawu zeemephu ukudala inxalenye ebalulekileyo yendawo yokusetyenziswa kwimeko yendalo "njenge-intersection ethile" okanye amabala amnyama awaziwayo angase alungele ukuqeqesha kumcimbi wemizuzu okanye iiyure endaweni yeentsuku okanye iiveki.Iprojekthi yokugqibela ekhankanywe ngu-Kumar, inxulumene nayo shishini. Ngokukodwa kunye nethuba lokusebenza ngokulandelelana kweemoto ezinokuziqhuba. Kodwa, ukwenzela ukudala nokwenza iimvavanyo kwiindawo zokuqhuba ukuqhuba, kufuneka siyazi ukuba umntu uziphatha njani phambi komzila. Simele 'silingise' indlela umntu acinga ngayo kwiimeko ezahlukeneyo. Oku kusibuyisela kummandla we-AI (Intelligence Intelligence) ejolise ekuveliseni ukuziphatha kwengqondo yomntu. Kule nto siyongeza U kufunda kuba iimashishini kufuneka zikwazi ukubona iipatheni zokuziphatha zodwa kunye "nokuqikelela" ukuziphatha.
Kwaye ngenxa yokuba amaqela ezininzi iinkampani sele sele zinezixhobo zombini kunye neenkqubo zenkampani yeekhamera, zinokukhishwa ngokuthe ngqo kwiimeko zeMantle kunye nokukwazi ukuqeqeshwa embonweni nakwiimpawu ze-prototypes.
Isinyathelo ngokubhekiselele kwikamva elifanelekileyo kwaye linqwenelekayo ngexesha elifanayo
Kumar uphetha ngokuthi "iingcamango ezivela ekwakhiweni kwemimodeli yokuvavanya ukuqhuba ngokuzimela eziquka ukulungelelaniswa kwezinto zokuhamba, ukwakhiwa kweimidlalo zeVR apho ungaba khona naphi na kwilizwe kwaye uzicwilise kuloo mava kufuna ezinye izixhobo kunye nobuchule obukhulu. "
Nangona kubonakala kukude kakhulu neyinyani yethu, inyaniso kukuba amava akhona. Kodwa, ukwenzela ukuba izisombululo zendawo zisetyenziswe kwimeko yethu yemihla ngemihla, akufuneki ukuba zihambelane nokuhlola okutsha kodwa zikhangele abo bangenza ukuba le projekthi ibe yinyani.
Yingakho umbhali egxininisa kwiimpawu ezimbini: "indawo"Kwaye"se benzisi". Kulula porque porque para hacer 3D Spatial accesible, prevalente y útil “se tiene que bajar o disminuir la barrera existente para dar paso a la experimentación; tiene que ser ‘fácil de jugar y soltar’”. Luego añade, “sólo cuando creadores de todo tipo puedan experimentar y luego construir soluciones en esos experimentos en cuestión de segundos, el gran público podrá beneficiarse”
Ukongezelela, i-3D Spatial kufuneka idlule i-sieve ye- se benzisi, oko kukuthi, xa abasebenzisi bayayidinga yonke imihla kwaye bayayisebenzisa ngaphandle kokucinga ngayo; xa kuza kuba yinto evuthiweyo kwaye ilungele ukusetyenziswa okuphambili. Sithetha ngovavanyo oludumileyo Larry Page Kumele ifakwe kwaye ivunyiwe
Ndicela umfundi weGeofumadas, i-Orient imizamo yakho yokufezekisa oku umoya omtsha ekubhekisele kuyo emsebenzini wakho wobugcisa?
Eligiendo un proveedor para correo masivo - experiencia personal
Umtshini weGeo eBrazil